Kachasị Mma Cloudgwé ojii Nchekwa Sistem | Akụkọ akụrụngwa
Kwa ụbọchị vidiyo ma ọ bụ faịlụ foto na-etinye nchekwa karịa na ngwaọrụ anyị, nke a nwere ike ịbụ nsogbu nye ọtụtụ ndị na - enweghị ike iji nchekwa nchekwa gbasaa onwe ha. Nsogbu a na-enye nsogbu karị n'ihe gbasara ngwaọrụ mkpanaka, nke anyị na-eji kwa ụbọchị ma ọ bụghị naanị na-agbakọ faịlụ multimedia, mana otu usoro na ngwa ahụ na-ejuputa ebe nchekwa anyị obere.
Iji zere eziokwu nke iwepu ozi anyị weere dị mkpa, dị ka foto ma ọ bụ vidiyo nke oge dị mkpa, anyị nwere ike iji ya igwe ojii. O nwere ike iyi ihe dị ize ndụ ịnweta ozi anyị niile na ịntanetị mana ọ bụ nke ahụ, ọ dị mma karịa ịnwe ya na njedebe, na ọ bụrụ na ị zuru ohi ma ọ bụ funahụ ya, ọ gaghị ekwe omume iweghachite ya. N'isiokwu a anyị ga-ekwupụta usoro kachasị mma iji chekwaa ozi anyị n'efu na-enweghị ihe ize ndụ nke ịnwe ya.
Usoro nchekwa a anaghị enye gị ohere ịchekwa foto gị ma ọ bụ vidiyo, ọ ga-aba uru ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkekọrịta akwụkwọ ma ọ bụ akwụkwọ ọnụahịa, ebe ọ bụ na mgbe ị buliri ya na igwe ojii ị ga-enweta ya site na ngwaọrụ ọ bụla. Ọmụmaatụ: bulite dọkụmentị ma ọ bụ faịlị anyị nwere n’ebe anyị na-ejegharị ejegharị iji jiri ya na kọmputa ma ọ bụ na kọmputa. Anyi aghaghi iburu n’uche na akuku ndi nwe ya n’adighi oke, ya mere n’isiokwu a anyi gha akowaputa ikike nke oru nile nyere.
1 Amazon Cloud mbanye
1.1 Otú o si arụ ọrụ
2 Google Drive na Foto Google
2.1 Uru nke mbanye
2.2 Uru nke Foto
4 Otu mbanye
Amazon Cloud mbanye
Amazon nwere ọrụ nchekwa ya na igwe ojii, ya na mbipute ya n'efu ma kwụọ ụgwọ. Na Ozi onwe onye site na Amazon Cloud Drive free, nke i nwere ike inwe faịlụ ruo 5 GB. Na ugwo oru ga-enye gị ohere ịnweta ohere ọzọ nwere ike ịbụ 20GB, 50GB, 100GB, 200GB, 500GB, na ihe ruru 1000GB nchekwa igwe ojii. HERE ị nwere ike ibudata ya.
Ị kwesịrị nwee akaụntụ Amazon na ị wụnye otu n'ime ndị ahịa. Na sistemụ arụmọrụ gị, a folda a na-akpọ «Cloud Drive». Ihe ị tinyere na folda ahụ bụ echekwara na igwe ojii
Ọ bụrụ na ịnwere ngwaọrụ ndị ọzọ, dịka kọmpụta ọzọ, ị wụnye onye ahịa na kọmputa nke abụọ a site na Amazon Cloud Drive. Onye obula faịlụ gị ga-adị, E wezụga nke ahụ ga-mmekọrịta ma ụzọ.
Ọrụ a bụkwa maka Smartphone ma ọ bụ mbadamba iOS ma ọ bụ gam akporo. Ikwado nyefe nke ozi ma ọ bụ faịlụ n'etiti sistemụ abụọ.
Google Drive na Foto Google
Google na-enye ihe bụ ọkacha mmasị m ọrụ maka ojiji nkeonwe. Google Drive na-enye aka 15 GB n'efu, onye ị ga-enweta nweta ihe nchọgharị weebụ ọ bụla ma ọ bụ ngwa maka Smartphone ma ọ bụ mbadamba. N'ihe banyere foto Google, onyinye a na-enye n'efu na-adọrọ mmasị karị ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ebe ọ bụ na anyị ga-enweta ya kpamkpam n'efu nchekwa na-akparaghị ókè nke foto anyị dị elu maka ndụ.
Uru nke mbanye
Abawanye nnweta na mmekọrịta.
Site na nkwa nke sava nke aka nke Google.
Nha faịlụ ndị ị nwere ike bulite buru oke ibu.
Ọ nwere zuru ndakọrịta na ndị kasị iche iche na nsụgharị nke Excel, Powerpoint na Word, ihe ndị bụ isi nke ngwugwu MS Office.
Mejuputa ịchekwaa onwe, otú nsogbu nke adịkwa faịlụ na ị na-arụ ọrụ na adịkwa n'ihi kọmputa ọdịda bụ ihe nke gara aga.
Achọghị nlekọta ọ bụla maka nke gị. Google ga-ahụ maka idobe sistemụ oge niile.
Uru nke Foto
Mee ọ rụọ ọrụ akpaka mmekọrịta na anyị Smartphone Ọ na - eme ka ọ dịrị anyị mfe, na - eme nnomi ndabere nke foto ma ọ bụ vidiyo anyị oge ọ bụla anyị jikọtara ya.
Unlimited nchekwa kpamkpam free.
Na-ahazi, kekọrịta ma jikwaa foto na vidiyo na otu aka.
Ọ dakọtara na ụdị ngwaọrụ niile. iOS o android.
Ọ dị mfe iji, na kensinammuo interface.
Na-etinye teknụzụ dị ike nke google ọchụchọ. Yabụ, ị nwere ike iji foto ọ bụla chọọ foto gị. Mgbe ị na-achọ "nkịta", dịka ọmụmaatụ.
Ọ nwere ọrụ na i scanomi foto ochie, wepu nchapu na ntụgharị, na-echekwa agba ha na ọdịdị ha.
A kpochapụwo n'etiti ndị ochie, nwere ọtụtụ ama ma, dịka ị ga-ahụ, ọ nwere ike ọ gaghị abụ nhọrọ kachasị ọnụ. Ha na-enye gị 2 GB nke nchekwa enwere onwe gị na igwe ojii gị, nke ị nwere ike ịgbasa ruo 18 na-arụ ọrụ dị mfe ma ọ bụ obere. N'agbanyeghị na ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị ama na ochie nyiwe, ọ ghọọ kpam kpam nke oge ebe ụkpụrụ bụ na ọ na-enye gị ihe absurddly ngosi ikike, nke ga-abụ ihe ọ bụla dị ka anya dị ka ị na-echekwa faịlụ.
N'agbanyeghị nke ahụ, ọ bụrụ na ịnwere ike ịnweta ụfọdụ ihe achọrọ iji ruo 18gb nke nchekwa, iru 16GB dị mfe, naanị ị ga-akpọ ndị kọntaktị ka ha mepụta akaụntụ. N'ụzọ dị otu a, n'agbanyeghị nchekwa nke izizi ya, anyị ga-enwe ọrụ zuru oke iji rụọ ọrụ, ebe ọ bụ na ọ dakọtara na ha abụọ iOS y android.
Ya ugwo usoro bụ na niile mara mma maka otu ojiji, ebe ọ bụ na ọ bụ otu n'ime ọrụ kachasị ọnụ na mpaghara ahụ, yana a ugwo kwa ọnwa nke € 11,99 ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ kwa afọ nke € 119,99. Maka iji azụmaahịa, ihe gbanwere, ebe ọ nwere uru ndị ọ nweghị ọzọ nwere.
Ọrụ ọzọ kachasị ogologo na ngalaba a bụ mbụ SkyDrive, ọrụ nke m bụ onye ọrụ ruo mgbe ha gbanwere atụmatụ efu. Na November 2, 2015, Microsoft kpughere na a na-ewepụ atụmatụ nchekwa na-akparaghị ókè maka Office 365 Home, Personal na Mahadum na nchekwa ahụ. Free OneDrive ga-ebelata site na 15GB gaa naanị 5GB.
Eziokwu a bụ ihe kpatara na ọtụtụ ndị ọrụ gbanwere usoro ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ kwaga na nyiwe ndị ọzọ na-enye nchekwa nchekwa n'efu, ọbụlagodi na ọ bụ ezigbo nyiwe maka ụgwọ nke € 2 kwa ọnwa ga-enye ohere ịnweta nchekwa 100GB.
Mepee ngwa ngwa ma chekwaa faịlụ OneDrive na ngwa Ọfịs dịka Okwu, Excel, PowerPoint, na OneNote.
Choo foto n’enyemaka nkpado akpaka.
Nata ificationsma Ọkwa mgbe edeturu akwụkwọ edetu.
Kekọrịta ọba egwu nke foto na vidiyo kacha amasị gị.
Jiri OneDrive kọwaa ya, banye ma kọwaa faịlụ PDF.
Banye na faịlụ gị kachasị mkpa Enweghị njikọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Sistemụ nchekwa igwe ojii kachasị mma